Keltner Breakout Forex Day Forex Ukuhweba Isu | ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Forex Breakout Strategies Keltner Breakout Forex Day Forex Ukuhweba Isu
Keltner Breakout Forex Day Forex Ukuhweba Isu
1 Keltner Breakout Forex Day Forex Ukuhweba Isu
1.1 Keltner Channel Amabhendi - Okuhlukile Ethile
1.3 Thenga (Long) Trade Isethaphu Imithetho
1.4 Thengisa (Short) Trade Isethaphu Imithetho
1.5.3 Indlela ukufaka Keltner Breakout Forex Day Forex Ukuhweba Isu?
Isiteshi noma izinkomba band ezisekelwe ungomunye amathuluzi ethandwa kakhulu phakathi kwabahwebi, futhi lokhu kungaba ngesizathu esihle. In lelisu, sizobe ukuhlola omunye izinkomba kakhulu Underrated isiteshi ezisekelwe, the Keltner Channel.
Abantu bakholelwa izinto eziningana isiteshi noma izinkomba band ezisekelwe. Sinazo olokhu ethandwa Bollinger Bands, isiteshi Donchian, kanye Keltner Channel, futhi cishe ezinye ngaphezulu. Zonke lezi izinkomba babe nezici ezifanayo nge umehluko ambalwa okuncane. ukuvala Okokuqala, zonke lezi izinkomba zisuselwa umugcamkhatsi okuvamise uhlobo i isilinganiso sentengo noma isilinganiso sokuhamba. Bese, esekelwe isilinganiso, esebenza njengesikhali umugcamkhatsi, bands yangaphandle nazo abekwa nangaphezulu umugcamkhatsi. Lezi imigqa abekwa esekelwe computations ezahlukene kanye nemingcele. Kungaba ukuphambuka kusuka umugcamkhatsi noma esekelwe highs yamuva noma kuvumela. Okokugcina, zonke lezi abekwa ku ishadi intengo ngokwayo. Lokhu kuvumela abahwebi ziyayiqaphela indlela intengo iyaphendula ezindaweni ezizungeze lezi imigqa.
Indlela ejwayelekile yokubheka ngalezi zinkomba ukucabangela touch of umugca losemkhatsini esifubeni noma njengoba sibuyele ukuze isilinganiso senani noma ushintsha mkhuba. Imigqa yangaphandle ngakolunye uhlangothi kuthiwa Ibhekwa njengento izindawo overextended lapho intengo ungase bounce off futhi ukuqala ephindela asho. Ngendlela, imigqa sangaphandle kungase kucatshangelwe ezigobile njengezinto zokuthutha ashukumisayo futhi resistances. Lezi izici ukwakheka wesiteshi izinkomba band ezisekelwe ezahlukene kakhulu. Ukuba umugca lohlukanisa emkhatsini ivumela abahwebi ukubona nokuchema wemakethe, kuyilapho ngesikhathi esifanayo, kokuba izibopho yangaphandle vumela abahwebi ukuthatha kusho reversion abathengisa.
Keltner Channel Amabhendi - Okuhlukile Ethile
I Keltner Channel, sifana elinye iviyo nesiteshi ezisekelwe izinkomba ngokuvamile asetshenziselwa ngendlela efanayo njengoba Bollinger Bands. Nokho, the Keltner Channel kancane kuyahluka ne Bollinger Bands. Umugca lohlukanisa emkhatsini namanje uhlobo isilinganiso sokuhamba, i lomchazi ezihambayo isilinganiso. Umehluko ezinkulu Nokho kukhona amaviyo yangaphandle. I Bollinger Band isebenzisa ngeziphambeko ejwayelekile kusukela kusho njengoba isisekelo imichilo yangaphandle. I Keltner Channel ngakolunye uhlangothi isebenzisa i Isilinganiso Ibanga Iqiniso (ATR) njengesisekelo imichilo yangaphandle. Lokhu kwenza kube lolumalula ngaphezulu kodwa namanje ngempumelelo kakhulu.
Ukuba ukuthi engqondweni, lapho kungaba ngezindlela ezimbili ukubheka bands elingaphandle Keltner Channel. Kakhulu Paradigm ezivamile lokhu. Intengo ithi Ase ingaphezu umugcamkhatsi ke sizoxoxa emakethe njengokuba ukuchema kuzo bullish. Bese, emvelweni yinjwayelo emakethe, ake sithi intengo labhampa off umugca lohlukanisa emkhatsini wawela phezu band yangaphandle engenhla. Iningi kusho reversion abahwebi ungacabanga ukuthi usevele overextended ngoba intengo isivele amabanga amade uma liya kude kusho. Babebe ukuqala ukubeka kusho reversion abathengisa enethemba lokuthi retraces intengo asho. Okunye abahwebi abangafuni ukudayisa reversion kusho angase nawo ubeke sibukela ngoba intengo kuthiwa "overextended". Nokho, uma ufuna ukuza ukucabanga kwalo, sesisungule kakade ukuthi esiyikho i uptrend. Inani Bavala ngaphezu band yangaphandle engenhla, okungase kube amaningi ezithile senhlobo isilinganiso ikhandlela. Lokhu kungasho ukuthi kukhona umfutho ngemuva ikhandlela ukuvala amabanga amade uma liya phezulu imichilo. Kwakungeke kuvesane uthole ukuthi kude ngaphandle umfutho. Asikwazanga zithi ikhandlela uye siqhamukile ukumelana ashukumisayo, okuyinto elingenhla band yangaphandle.
Lelisu uyocabangela Kuvalwa eqinile ngale imichilo elingaphandle Keltner Channel njengophawu umfutho onamandla. Ngakho, esikhundleni sokuthatha kusho reversion abathengisa, sizobe ukuthatha ukuhweba kokuqondisa ikhandlela umfutho Breakout.
Ngokuthatha lesi isiqondiso, sithola ukugibela umfutho kwalowo ikhandlela futhi cishe kube ekuqaleni Umkhuba omusha.
Keltner_Channel ngokwezifiso inkomba
ubude - 20
Ubude besikhathi: 5-iminithi, 15-iminithi & 1-ishadi ihora
lwemali Pair: iyiphi ngazimbili ezinkulu, ngazimbili ezincane neziphambano nge lisakazeka ongaphakeme
Thenga (Long) Trade Isethaphu Imithetho
Inani okufanele abe ngaphezu umugcamkhatsi we Keltner_Channel
A umfutho ikhandlela eqinile kufanele ukuvala ngaphezu band engenhla elingaphandle Keltner_Channel
Faka i-oda Thenga emakethe esekuficile ikhandlela ngesikhathi
Setha ukulahlekelwa stop ngezansi ikhandlela entry kanye engenhla band yangaphandle
Belandelela ekulahlekelweni stop ngezansi umugca lohlukanisa emkhatsini we Keltner_Channel kuze wayeka ukuphuma e inzuzo
Thengisa (Short) Trade Isethaphu Imithetho
Inani kufanele kube ngezansi umugca lohlukanisa emkhatsini we Keltner_Channel
A umfutho ikhandlela eqinile kufanele ukuvala ngezansi aphansi band elingaphandle Keltner_Channel
Faka i-oda ethengisa emakethe esekuficile ikhandlela ngesikhathi
Setha ukulahlekelwa stop ngaphezu ikhandlela entry kanye aphansi band yangaphandle
Belandelela ekulahlekelweni stop ngenhla umugca lohlukanisa emkhatsini we Keltner_Channel kuze wayeka ukuphuma e inzuzo
Isihluthulelo lelisu is ekuboneni umfutho kwesokudla ikhandlela Breakout. Wena akumele ngidayisa nje bhoboza elincane imichilo yangaphandle njengesibambiso mandla namanje bounce off.
Futhi, ikhandlela Breakout kufanele uyeza off ukuhlanganisa noma wamukele lebanga lentengo ohlangothini efanele umugca losemkhatsini esifubeni noma umugca losemkhatsini esifubeni. Uma uthatha ukuhweba bullish, sokuhlanganiswa kumele umugcamkhatsi noma ngenhla umugca losemkhatsini esifubeni. Iphendule for the bearish ukuhweba isethaphu. Ukuba lokhu engqondweni, qaphela ekuthatheni abathengisa lapho kufika ikhandlela umfutho kusuka ukuhlanganiswa ku okuphambene ohlangothini band njengoba lokhu kungase kusho ukuthi umfutho isivele uqale amakhandlela ambalwa emuva futhi umfutho kakade kube kwakuqeda.
Njengoba lena ukuhweba isu usuku, ake uxoxisane ezibekiwe. Lelisu leyo futhi kungasebenzi kwamanye setups ukuphambuka kulokho okukhulunywe ngaye ngenhla. Kungaba kwenziwe kushadi ngomzuzu-1 noma phezu ishadi angu-4. Nokho, kushadi ngomzuzu-1, Intengo ivame ukuba sibuyele ukuze umugca lohlukanisa emkhatsini kaningi ngisho ukuthambekela okusobala. Lokhu kungase kukwenze njengoba abadayisi ukuba ukuthola futhi aphume emakethe kancane kaningi kakhulu futhi kungakulahlekisela ngakunye okuningi. Lokhu engcono adayiswa kushadi ngomzuzu-5, kodwa kungashiwo futhi usebenza lwemizuzu engu-15 nangemva kwamahora angu-1 ishadi ikakhulukazi uma kukhona izindaba ngemuva umfutho kanye ukuhweba waqala ekuqaleni esimisweni zokuhweba. namanje, ke singasetshenziselwa kushadi angu-4 nangaphezulu njengomsebenzi ube uyenza jika, kodwa Amathrendi eqinile awubonakali kuhlale isikhathi eside ngesikhathi ezibekiwe ephakeme ngoba inhliziyo ephikisayo noma izindaba kungaqala njengoba isikhathi sihamba.
Cheers kanye nokuhweba ujabule!
Keltner Breakout Forex Day Forex Ukuhweba Strategy luyinhlanganisela Metatrader 4 (MT4) inkomba(s) futhi ithempulethi.
Keltner Breakout Forex Day Forex Ukuhweba Strategy inikeza ithuba ukuthola izici ezihlukahlukene futhi amaphethini intengo Dynamics ezingasaziwa ezingabonakali ngeso lenyama.
Indlela ukufaka Keltner Breakout Forex Day Forex Ukuhweba Isu?
Download Keltner Breakout Forex Day Forex Ukuhweba Strategy.zip
Yisa kwesokudla ukukhetha Keltner Breakout Forex Day Forex Ukuhweba Isu
Uzobona Keltner Breakout Forex Day Forex Ukuhweba Strategy itholakala ku Ishadi yakho
Isiqephu esedluleInsta Trend Forex Ukuhweba Isu
Isiqephu esilandelayoKijun Misa futhi Hamba Forex Ukuhweba Isu